Uncedo lweNdalo lweProstate ekhulisiweyo
Health Holistic for Men
Ukwandiswa kweprotrath akuyona imeko embi, kodwa ibeka uxinzelelo kwi-urethra kwaye inokudala izikhalazo zokungcungcutheka ezinjenge-urination frequent, ukuphuthuma kwe-urinary, isidingo sokuvuswa ebusuku ukuvuthwa, ubunzima bokuqala, ukunciphisa amandla omlambo womchamo, ukuphazamiseka kwesigxina, ukugqitywa okungazalwanga kwintsimbi kunye nokungakwazi ukuhamba. Ukuba ukushiywa kungakhange kuhlolwe, i-benign prostatic hypertrophy inokubangela iingxaki ezinzulu ngaphezu kwexesha kubandakanya izifo zokugonywa kwe-urinary , i-bladder okanye i-kidney, okanye i-incontinence.
Iprostate eyandisiweyo kunye neNgenakwenzeka
Kubalulekile ukunyamekela iprotate yakho kwaye udibanise nayiphina iprotate, kuba yi-prostate eyandisiwe, i-prostatitis (ukuvuvukala kweprotrate) okanye umdlavuza wesifo seprotate ekuqaleni. Thatha indima ekhuselekileyo kwaye uzikhusele ngokubeka iprotate yakho rhoqo. Ukunyangwa kwezemveli kwimiba yeprotate kubandakanya ukususwa kokutyunjwa kwazo zonke okanye inxalenye yeprotate. Ngelixa abaninzi abantu bafumana uxolo lweempawu, kunokubashiya bengenamandla. Ukuze uqaphele impilo, oku kufuneka kusetyenziswe nje njengesithuba sokugqibela.
Iziphakamiso zeNtlalo zeProstate ekhulisiweyo
Uvavanyo lweProstate - Ukuba uneminyaka engaphezu kwama-40, ugqirha wakho enze uvavanyo lweprotate ngexesha lokuhlola rhoqo. A
Yidla Ilungelo - Hlanganisa ukutya okunempilo okuzaliswe ziqhamo ezininzi kunye nemifuno kunye nefuthe kumafutha angatyiweyo, ushukela kunye nokutya okucwangcisiweyo.
I-Kegel Ukuzivocavoca kunokwenziwa ukuphucula ukujikeleza kwezi zicubu. Umsebenzo we-kegel wenziwa ngokukhupha zonke izihlunu ezijikelezayo kwi-scrotum kunye ne-anus. Phinda le ntshukumo izikhathi ezili-10. Zama ukwenza oku 'angabonakaliyo' ukusetyenziswa kwamaxesha ama-5-6 ngosuku.
Wayebona i-Palmetto - Kuba amadoda abhekene nokunyuswa kweprotate, wabona i-palmetto yindawo yokuqala. Ukubona i-palmetto inomlando omude wokukhulula ukuvuvukala kweetestular kunye nokuvimbela i-hormone enoxanduva lokukhulisa i-prostate.
I-Zinc sele isetyenziselwa amashumi eminyaka ukuxhasa iprotate ephilileyo.
I-Nettle nePygeum ziye zaboniswa ukuba zisebenzise ukukhupha iimpawu ezinxulumene neprothete ekhulisiweyo. Zingasetyenziselwa zodwa okanye ngokubambisana ne-saw palmetto.
Inhlanganisela enkulu yeengxaki zeprotate i -Sunshine Men's Formula kunye neLycopene, equkethe i-pygeum, ibone i-palmetto, i-gotu kola, i-nettle kunye ne-zinc. Unokuzama kwakhona i -Sun's Sunshine ye-PS II okanye iPX . I-PS II iqulethe iindawo ezixhatshazwayo kunye nezochasayo eziyinzuzo yokugcina umsebenzi we-prostate gland.
Damiana - Hlanganisa imifuno yedamiana kwiprogram yakho yezempilo. UDamiana unomlando omde wokuncedisa ama-hormone omzimba.
I-Hydrangea yinye imifuno exhasa inkqubo ye-urinary, apho iyaziwa ukukhuthaza impilo yonke yeprostate gland kwaye inokunceda ukunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala.
A nonoxidants - Ukuxhaswa kunye nama-antioxidants (iivithamini A, C, E kunye ne-selenium), ezifana nezofumaneka kwiNgcaciso yoKhuselo okanye kwi-Antioxidant ephezulu iya kunceda ukukhusela ezi zicubu ezinobungozi.
Iprotrate yintsimbi engumsila ehlala phantsi ngaphantsi kwebhanti kumadoda kwaye iyinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokuzala. Yenziwe ngama-lobes amabini kwaye ihlanganiswe ngoluhlu lweethambo, i-prostate idlula kwixesha ezimbini zokukhula. Okokuqala kwenzeka ekuqaleni kobuntwaba, xa i-prostate iphindwe kabini ngobukhulu. Ephantse kwiminyaka eyi-25, i-gland iyaqala ukukhula kwakhona.
Esi sigaba sokukhula sesibini siphumela kwizinto ezichongiweyo njenge-prostate ekhulisiweyo.
Njengoko iprotrath iya kukhula, i-tissue of tissue surrounding it iyanqanda ukunyuka, ibangele ingqungquthela ukuba icinezele i-urethra. Ngelixa i-data ihluka, kukholelwa ukuba abaninzi abantu abangaphezu kweminyaka engama-45 bafumana ubuninzi beprothete yokukhulisa, kodwa bangaphila impawu mahala. Olu khuliso lisoloko lungozi, kodwa luhlala lubangele iingxaki zokuvuthwa kamva ebomini. Ngama-60, kukholelwa ukuba ama-80% abo bonke abantu bafumana ukuphazamiseka kwe-urinary ngenxa yokunyuswa kweprothete.
UDkt. Rita Louise, uF D nguMgqirha weNaturopathic, umsunguli we-Institute Of Applied Energetics kunye nomphathi we-Just Energy Radio.